တောင်သမန်သားလေး: June 2017
လွယ်ကူစွာတိုင်းတာနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော ဖုန်းဆော့ဝဲ
လွယ်ကူစွာတိုင်းတာနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော ဖုန်းဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်။
သစ် တန်၊ဈေးနှုန်း တွက်ခြင်း
ရွှေ ဈေးနှုန်း တွက်ခြင်း
စိန် ဈေးနှုန်း တွက်ခြင်း
ရေဝင် ဆန့် တွက်ခြင်း
အုတ်၊သဲ၊မြေ ကျင်း တွက်ခြင်း
မြေဧက တွက်ခြင်း များကို လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
Credit - My Little Android Applications
ဒီဇိုင်းလန်းပြီးတော့ သွက်လက်မြန်ဆန်ပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသုံးပြုနိင်တဲ့ facebook Application အသစ်ထွက်ပါ ဒီfacebook ဒီဇိုင်းက တော်တော်လန်းတယ် ဒီfacebook ကို အင်ဒိုနီးရှား ဆိုဒ် က မလာတယ်လိုပြောပါတယ် ရှားပါပစ္စည်းလေးပါ ဒီfacebook ကို အသုံးပြုလိုပါက အရင်ရှိပြီး facebook ကို ဖျက်ပြီးမှ အသုံးပြုရမှာပါ။
မေး - Android ဖုန်းတွေမှာ Developer Option ဖော်ပြီးသွားရင် ပြန်ဖျောက်လို့ရပါသလား။
ဖြေ - ရပါတယ်။ Setting ထဲက Application ထဲသွားပါ။ Application Manager ထဲက More ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Show System Apps ကိုနှိပ်ပြီး Setting ကိုထပ်နှိပ်ပါ။ Storage ကိုနှိပ်ပါ။ Clear Data ကိုနှိပ်ပြီး Delete ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Developer Option ပြန်ပျောက်သွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Gmail ထည့်သွင်းထားတဲ့ Phone တွေအတွက် Frp Lock မကျစေရန် Oem Unlock ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီးမှလုပ်ပါ။ Setting ကို Reset ချသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက် မြန်မာဖောင့်များပျက်သွားရင် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ထည့်သွင်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
မေး - အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့် Honor-U10 ဖုန်းလေး ရေနည်းနည်းစိုသွားတာဗျာ။ အခုဖုန်းက Touch ဆွဲလို့ တော့ရတယ်။ အောက်ဘားကီးလေးတွေ နှိပ်လို့မရတော့ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေမလဲဗျာ။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ အစ်ကို့ဖုန်းက Touch လဲမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ မလဲချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Easy Touch App ကို Download ဆွဲပြီးသုံးပေါ့ဗျာ။
မေး - အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ကိုင်တဲ့ Xiaomi ဖုန်းလေးမှာ Facebook Messenger က CB အလုံးလေးက တစ်ဖက်လူက စာပို့ရင် Messenger အလုံးလေးပေါ်မလာဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေမလဲ။ ပြောပြပါ။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ ဒါက Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ တစ်ခါတစ်လေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ CB က Messenger အလုံးလေး ပြန်ဖော်ချင်လျှင် Setting > Permissions > Permissions > Messenger Application ကိုရှာပြီးဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် Display Pop-up Windows ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
မေး - မင်္ဂလာပါအစ်ကို။ ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာ Zapya နဲ့ File Transfer လုပ်ရင် apk File နဲ့ တခြား Data ကူးလို့ရပေမယ့် MP3 File ကူးရင် Fail ပြနေလို့ပါ။ SD Card လဲကောင်းပါတယ်။ Storage လဲ မပြည့်သေး ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ မင်္ဂလာပါအစ်ကို။ Storage မပြည့်ဘဲ Zapya နဲ့ ကူးရင် Fail ပြတာက Zapya Version အနိမ့် (သို့) အမြင့်ချိန်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေး - အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့်ဖုန်းက ပါဝါကီးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Logo လည်ပြီး Home Screen ရောက်မှ ပါဝါ ပြန်ပိတ်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲဆရာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲဗျာ။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ အစ်ကိုအဲ့ဒါက Battery Error ပါ။ ဘက်ထရီအသစ် ထည့်သုံးရင် ပြန်ကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ Battery Ampera Cell ခန်းသွားလို့ဖြစ်တာပါ။
မေး - အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့် Phone က နားကြပ်မထိုးဘဲ နားကြပ်ပုံပေါ်နေတယ်။ အသံလည်းမကြားရဘူး။ ဘာဖြစ်တာလဲဗျာ။
ဖြေ - ဟုတ်။ အစ်ကို Phone က V လိုင်းပျောက်နေလို့ပါ။ V လမ်းကြောင်းစစ်ပေးရပါမယ်။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ အစ်ကို့ရဲ့ဖုန်းက C, G နှစ်ကတ်သုံးဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး Farmware အရင်ရေးကြည့် သင့်ပါတယ်။ GSM တစ်ကတ်သုံး ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ Network အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ PA IC ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Sim Card တွေကို အဲ့လိုခဏခဏပြောင်းပြီး မသုံးသင့်ပါဘူး။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
မေး - Facebook ဖွင့်လိုက်ရင် Facebook ထဲမှာ စာတွေတက်ဖို့ အရမ်းကြာနေလို့ ပြီးတော့ Command တွေရေးဖို့ဖတ်ဖို့ဆိုရင်လည်း ကြာနေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ အဲ့လိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရပါသလဲ။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Facebook ကိုနေရာ မျိုးစုံကနေ Devices မျိုးစုံနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလာတာတွေကြောင့် Active Session က မှတ်သားထားတာကြာလေ သုံးရတာလေးလေဖြစ်လာတာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Facebook ရဲ့ Setting ထဲကိုသွားပါ။ Account Setting ထဲထပ်ဝင်ပြီး Security ထဲသွားပါ။ ပြီးရင် Active Sessions ထဲမှာရှိတဲ့ အရာတွေအားလုံးကို ဖြုတ်လိုက်ရင် Facebook ရဲ့ Status တွေက အရင်ကထက်ပိုမြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Android ဟာ ကမ္ဘာမှာ လူသုံးအများဆုံး Mobile Operating System ဖြစ်တာနဲ့ အညီ စွမ်းဆောင်ချက် အသစ်များကို အစဉ်အမြဲ ထည့်သွင်းပေးနေပါတယ်။ Android မှာ စွမ်းဆောင်ချက်များစွာ ရှိတဲ့အတွက် အားလုံးကို သိနားလည်ဖို့တော့ အချိန်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု Tutorial မှာတော့ အသုံးဝင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ App Notification များကို Disable လုပ်ပါ။
သင် သိပ် အသုံးမပြုတဲ့ App မှ Notification များကို မြင်ရတာ စိတ်ရှုပ်ရင်တော့ ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Android 4.1 နဲ့ အထက် ဖုန်းများမှာ အောက်ပါ နည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။
• Notification Bar မှ Notification ကို ဖိထားပါ။
• ပေါ်လာတဲ့ စကရင်မှ App Info ကို နှိပ်ပြီး Show Notification ကို Off လုပ်ပါ။
၂။ မိုဘိုင်းဒေတာ အသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ပါ။
သင့်ရဲ့ မိုဘိုင်းဒေတာ အသုံးပြုမှုကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားမှသာ ငွေကြေး ကုန်ကျမှု သက်သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• Settings> Data Usage ထဲသွားပါ။
• သင် တစ်လမှာ သုံးမယ့် ဒေတာ ပမာဏကို အ၀ါရောင်လိုင်းဖြင့် သတ်မှတ်ပါ။
• သင် ရည်မှန်းထားတဲ့ လရဲ့ အစနဲ့ အဆုံးရက်များကို သတ်မှတ်ပါ။
ဒါဆိုရင် သင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒေတာ ပမာဏကို ရောက်ရှိရင် သင့်ကို သတိပေးမှာပါ။
၃။ Google အကောင့်များစွာကို ထည့်သွင်းပါ။
Android ကို သုံးဖို့အတွက် Google အကောင့်တစ်ခု ရှိရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သင့်မှာ အကောင့်များစွာ ရှိရင်လည်း ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။
• Settings> Add account ထဲသွားပါ။
• Google ကို ရွေးချယ်ပြီး သင့်အကောင့်ကို ထည့်သွင်းပါ။
• ပြီးရင် Sync လုပ်ချင်တဲ့ အရာများကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
၄။ Automatic App Update များကို ပိတ်ပါ။
သင့်ဖုန်းမှ App များဟာ အလိုအလျှောက် Update ပြုလုပ်နေရင် မိုဘိုင်းဒေတာ ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Automatic App Update များကို ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။
• Play Store ကို ဖွင့်ပြီး Settings ထဲသွားပါ။
• Auto-update apps ထဲသွားပါ။
• Do not auto-update apps ကို ရွေးပေးပါ။
၀ိုင်ဖိုင် ဆက်သွယ်မှုကို ရမှသာ Auto Update လုပ်ချင်ရင်လည်း အဲဒီမှာ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
၅။ Android System Update ကို စစ်ဆေးနည်း
သင့်ဖုန်းအတွက် Android OS Update များ ရရှိပြီလားဆိုတာကို စစ်ဆေးချင်ရင် အောက်ပါ နည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။
• Settings> About phone/tablet ထဲသွားပါ။
• System updates ကို နှိပ်ပါ။
• Check now ကို နှိပ်ပါ။
၆။ Default Apps များကို ပြောင်းလဲပါ။
၀က်ဆိုက်များ ကြည့်ဖို့အတွက် Chrome ကို အသုံးပြုခြင်းလို အလုပ်တစ်ခုအတွက် သုံးမယ့် Default Apps များကို သင်က သတ်မှတ်ထားတယ် ဆိုပါစို့။ Default Apps များကို ပြောင်းလဲချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။
• Settings > Apps ထဲသွားပါ။
• All Tab ကို ရွေးချယ်ပါ။
• Default အဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားချင်တဲ့ App ကို ရွေးချယ်ပါ။
• Clear defaults ကို နှိပ်ပါ။
၇။ Animation များကို ပိတ်ပါ။
Animation များကို ပိတ်ခြင်းဖြင့် သင့်ဖုန်းကို လျှင်မြန်စေပါတယ်။ ဒီလို ပိတ်ဖို့အတွက် Settings ထဲမှ Developer Options ကို သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ Developer Options ကို မရသေးရင် Settings ထဲမှ About Devices ထဲမှ Build Number ကို အကြိမ်များစွာ နှိပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ You are now developer စာသားကို မြင်ရရင်တော့ သင့်အတွက် Settings အောက်မှာ Developer Options ကို သုံးနိုင်ပါပြီ။
Developer Options ထဲမှာ Window animation scale, Transition animation scale နဲ့ Animator duration scale တို့ကို ရှာပြီး Disable လုပ်ပါ။
အင်တာနက်လေး ၅ မိနစ်ဖွင့်ရုံနဲ့
နည်းပညာသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖတ်ရှုသိရှိနိုင်တဲ့
Myanmar Application Centre.apk ဖြစ်ပါတယ်..
ဓါတ်ပုံကို အပြည့်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပြီး သတင်းရယူချိန်မှာလည်း
နည်းပညာသတင်းရယူခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ မှတ်သားခြင်းတွေကို
အခုတစ်ခါတော့ ProShot ဆိုတဲ့ App တစ်ခုနဲ့ ရင်းနှီးသွားအောင်
Camera နဲ့ Photo ရိုက်နေကြတာ Mobile User တော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်။
ယခု ProShot ဆိုတဲ့ App ကတော့ ဖုန်းရဲ့ မူလပါတဲ့ Original Camera ထက်ကို
ပိုမိုပြီး ဆန်းသစ်အောင် Feature ဆန်းဆန်းလေးတွေ ထည့်သွင်းပေးထားတာကို
တွေ့ရတယ်။ သူထည့်သွင်းထားတဲ့ Feature တွေဟာလည်း
Mobile Devices တိုင်းလိုလိုမှာ အစဉ်ပြေပြေ ကြည်ကြည်လင်လင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာကိုလည်း
အခု အဆိုပါ App ရဲ့ ထူးခြားချက်လေးတွေကို အနည်းငယ်ပြောပြပေးပါမယ်။
- ညဘက် ကင်မရာရိုက်တဲ့အခါ၊ မှောင်နေတဲ့နေရာမျိူးမှာ တစ်ခြား Camera App တွေထက်
- ပိုပြီးကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်ကူးနိုင်သည့်အပြင်၊ Exposure ကိုလည်း
Limit Zero ထိ လျှော့ချပေးနိုင်တယ်။
- ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Mode အမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
- ရုပ်ထွက်ကိုလည်း HD အရည်အသွေးနဲ့ ရိုက်ကူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ App ကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Android Version 4.0 မှ 5.0.4 အထိတွင် Install လုပ်ကာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဘောလုံးချစ်သူများတွက် ဘောလုံးကီးဘုတ် (၇) မျိုး စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်တဲ့ Myanmar Fc Keyboard 1.2 APK
ကိုယ်အားပေးတဲ့ ဘောလုံး အသင်းတွေရဲ့ မြန်မာကီးဘုတ် ဒီဇိုင်းလန်းလန်းလေးတွေကို စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Myanmar Fc Keyboard ဖြစ်ပါတယ်။
အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ဘောလုံးချစ်သူများ မည်သူမဆို ရှယ်ထားနိုင်ပါတယ် ။
အောက်ကလင့်များ မှာ ဒေါင်းယူပါ ⚽
TTA Gapp Installer (KLMN) ================= Google App သွင်းရခက်နေတဲ့ China ဖုန်းတွေအတွက်ပါ Root မလိုအပ်ပါဘူး Android Kitkat မှ nougat ထိရသွင်းလို့ရပါမယ်။ ၁။ မိမိဖုန်ဗားရှင်းကို အောက်မှာတခါတည်း Show ပေးထားပါတယ် မိမိ ဖုန်းဗားရှင်းအလိုက် ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်သွင်းပါ။ ၂။ အပေါ်ဆုံး Google Account Manager ကနေ အောက်ဆုံး Playstore ထိအစဉ်လိုက်သွင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ် အားလုံးသွင်းပြီးရင်တော့ဖုန်းကို Reboot ချပေးပါ ၄။ ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ Playstore ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ ဆိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Accept ဆိုတာပေါ်ပါမယ် အဲဒါနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ၅။ အကောင့်ထည့်တဲ့ နေရာမရောက်သေးခင်မှာ Checking info မှာ နည်းနည်းကြာပါတယ် (အင်တာနက်ဖွင့်ထားရပါမယ် အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းလျှင်လည်းကြာပါတယ်) အကောင့်ထည့်ပြီးလျှင်တော့ Done ပါပြီ :D (Y) #FFA #TTA #MST DL Mediafire @ http://www.mediafire.com/?qs8zeqo1aoa6lyj DL pCloud @ http://pc.cd/JHd7 Playstore @ coming soon App Sponsored by Anycall Mobile
Posted by lin linn at 4:50 AM
ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက် Build Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-08) pdf
ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက် Build Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-08) pdf ကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
Credit : Ag Zaya
Download ACI 318M-08 pdf : 12.46 Mb
Posted by lin linn at 5:49 AM
Neutron Music Player ဆိုတဲ့ app ဟာ professional music player app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Audio format အတော်များများကို ထည့်သွင်းသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး lyric ဖိုင်များကိုပါထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
Streaming audio များကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သလို အခြား feature များစွာကိုလည်း ဒီ app မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ app ကို Play Store မှာ အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Android version 2.1 နဲ့အထက်မှာ ထည့်သွင်း သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
♪ နိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းထားတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ - MMK Exchange ♫
ပြည်တွင်းဘဏ်ရဲ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နိုင်မှု နှုန်းထားတွေကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ ကန်ဒေါ်လာ၊ စင်ကာပူဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ ဟောင်ကောင်အစရှိတဲ့ ငွေကြေးလဲလှယ် မှုနှုန်းတွေကို ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအလိုက် တစ်ချိန်တည်းမှာ နှိုင်းယှဉ်သိရှိနိုင်မှာပါ။ App ကို Android version 4.1 နဲ့အထက်မှာ သုံးနိုင်ပြီး Download လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ Download လုပ်ပါ။
ဖုန်းပေါ်ကနေ ၁၀ တန်းအောင်စာရင်းကြည့်နိုင်မယ့် Exam Result 2017 apk
Bhone Mying Myat Aung ရေးတဲ့ Android Application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. 2017 ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်စာရင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါမယ်.. Blog page လေးလုပ်ထားပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ကဏ္ဍလေးတွေခွဲထားပါတယ်.. ဝင်ကြည့်ဖို့တော့ အင်တာနက်လိုပါမယ်..
Download Exam Result 2017 apk : 1.8 Mb
ရိုးရိုးသော့တွေက သော့မတူရင် ဖွင့်မရတာပဲရှိတယ်.. မာစတာကီးနဲ့ဆို ဂျောက်ခနဲအသံတောင်မထွက်ဘူး..
Security PAD Alarm Lock
ဒီသောခလောက်က သော့မတူဘဲ သွားမဖွင့်နဲ့၊ တူနဲ့မတူနဲ့၊ ဆောက်နဲ့ မထွင်းနဲ့၊ အပ်နဲ့မကလော်နဲ့.. သော့ခလောက်ပိုင်ရှင်မဟုတ်ကြောင်း အသံစူးစူးနဲ့ အော်ပါလိမ့်မယ်..
ကိုယ်ထည်က အမာစားသတ္တုနဲ့လုပ်ထားတယ်.. သော့တံတွေက ထူးထူးခြားခြား ပုံစံနဲ့လုပ်ထားတယ်.. မိုးရေဝင်လည်း မပျက်တော့ အပြင်ခြံဝင်းတံခါးမှာလည်း တပ်လို့ရတယ်လေ... အသံကဘာနဲ့ပေးလဲဆိုတော့ နာရီဓာတ်ခဲ ၆ လုံးနဲ့ ပေးတာပေါ့.. အဲဒီနာရီဓာတ်ခဲ ၆ လုံးလည်း အပိုပါသေးတယ်ဗျ... သော့ပျောက်ရင်တော့ တော်တော်တိုင်ပတ်မှာဗျ.. မပူပါနဲ့ သော့ ၃ ချောင်းပါတော့ မိသားစုတစ်ယောက်တစ်ချောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ၃ ချောင်းကို တစ်နေရာစီမှာခွဲသိမ်းပေါ့..
သော့ခလောက်က အပြင်ခြံဝင်းတံခါးခတ်ဖို့ ကိုင်းရှည် နဲ့ အိမ်တွင်းတံခါးတွေ၊ ဗီရိုတွေ၊ သေတ္တာတွေမှာခတ်ဖို့ ကိုင်းတို ဆိုပြီး ၂ မျိုးလာတယ်.. ကိုယ်ကြိုက်တာ ဝယ်ခတ်ပေါ့ဗျာ...
မကြီးပါဘူး.. ကိုင်းတို 13000 ကျပ် နဲ့ ကိုင်းရှည် 18000 ကျပ်ပဲရှိပါတယ်.. ကိုယ့်တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေ လုံလုံခြုံခြုံဖြစ်ဖို့ ဒီလောက်လေးတော့ ကုန်မှာပေါ့ဗျာ.. ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲဆိုတော့ Ph 09451689031, 09787179972, 0942038377 ကိုသာ ဆက်လိုက်ကြပါဗျို့...
အထက်ပါပစ္စည်းမှာ 365 Online Shopping မှ ရောင်းချသော ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုမှာ ရောင်းချသူနှင့်သာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
Pattern Lock ဖတ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ ? ? ?
( 1 ) Pattern Lock ကျနေသော Android Phone အတွင်းမှ gesture.key
(2) Hex Editor ( Download >>> https://mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD
(3) Hex Code ကို Pattern Lock Number ဖတ်ပေးမဲ့ Link ( WIFI Connect )
ပထမ ဆုံး Pattern Lock ကျနေတဲ့ Phone ထဲက gesture.key ဘယ်လို Backup ဆွဲထုတ်မလဲ ? ? ?
အခုကတော့ Adb devices သိတဲ့ အခြေနေ ကနေ gesture.key ကို ဆွဲထုတ်နည်း ( Method 1 ) ကို ပြောပြပါမယ် ၊
Adb devices သိရင် Adb Command နဲ့ gesture.key ကို Backup ဆွဲထုတ်ပါ ( Need Root Access )
ဒါဆို gesture.key ရမည် ၊
gesture.key ကို HxD ထဲ ဖိဆွဲပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ ၊ ဒါဆို gesture.key ရဲ့ hex Code တွေ့ရပါမယ် Copy ကူးလိုက်ပါ ၊ Space ပါနေရင် ပူးပေးလိုက်ပါ ၊
အောက်က Link ကိုသွားဖို့ Computer ကို Wifi လွှင့်ပေးလိုက်ပါ ၊ ကွက်လပ်လေး တွေ့ရပါမည် ၊ စောစောက Hex Code ကို ထည့်လိုက်
ပြီးရင် Get gesture ကို နှိပ်လိုက်ပါ ၊
Gesture ဆိုပြီး မိမိ Pattern Lock Number ကို ဂဏန်း ဖြင့်
ပြပေးပါလိမ့်မယ် ၊ Pattern ပုံစံ သိချင် ရင် Show Pattern ကို
ဒါဆို Pattern Lock ဘာနံပါတ် ခတ်ထားဆိုတာ လမ်းကြောင်း
Pattern Lock See Hex Code Link = https://barney.0x539.se/android/
Pattern Lock Structure
B172E8A280DA8A7C9350006DEFC74CDAFF9A64E0 =6=>3=>4=> 1 =>2( Pattern No က 63412 ပါတဲ့ )
ဒါကတော့ Method ( 1 ) ကို အသုံးပြုပြီး Pattern Code ကို ဖတ်တဲ့နည်းပါ .. ( အခြား Pattern ဖတ်နည်းတွေကိုတော့ ကိုစိုင်းရဲ့ Paid Group မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်.. )
Credit : Ko Sai
Facebook မှာမြန်မာစာ မရလို့စိတ်ညစ်နေသူတွေအတွက် မြန်မာဖောင့်
မြန်မာစာထည့်ဖို့..မိမိဖုန်းကို Root လုပ်ရတာတွေ..
အခုထွက်လာတဲ့ နောက်ဆုံး Android Version တွေမှာ
Root လုပ်လို့တောင်မှာ..font မမှန်တာတွေ...
Google Chrome စတဲ့ Mobile Browser တွေမှာ မြန်မာစာ
မမှန်တာတွေကို..မိမိဖုန်းကို Root လုပ်စရာမလိုပဲ..
ပထမဆုံးတော့...apk ကို install လုပ်လိုက်ပါ...ပြီးရင် အောက်ပါပုံအတိုင်းတွေ့လိမ့်မယ်.. ၁. ဖောင့်သွင်းမည်ကို..ကလစ်ပြီး font ကို install လုပ်ပါ
၂. ဖောင့်ပြောင်းမည်ကို ကလစ်ပြီး...Display ကနေ ဖောင့်ကိုပြောင်းလိုက်ပါ.
Crack တွေ သီးသန့်ထည့်စရာမလိုပဲ Install ပြုလုပ်ထားရုံနှင့် အမြဲ့တမ်း
အသုံးပြုနိုင်မည် Cracked Box Generator Tool 2017 လေးကို ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။
Box မဝယ်နိုင်ကြသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့
ပါဝင်သော Tool တွေက :
*Miracle Driver Installation Windows 7_8_10 [ 86+64]
*All In One SP Flash Tools
*All In One SPD Upgrade Tools
*All In One Odin Tools
*Miracle Eagle Eye 2.27A
*Miracle Box V2.27A
*Piranha V1.55 Full
*Octopus Samsung 1.6.5
CLICKံHERE TO DOWNLOAD
Username - kolin
Password - 0853330915
Credit : Kolin
Posted by lin linn at 3:36 AM